Xildhibaan Saynab Maxamed Caamir “Xuduudaha Soomaaliland waa lagu dhiiran waayay Warbixinta Guddiga maxay faa’iido leedahay” – Kalfadhi
Xildhibaan Saynab Maxamed Caamir oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay nasiib darro tahay in aysan Guddiga madaxabaan ku dhiiran karin Xuduudaha ay Soomaaliland iyo kuwa uu murunka ka taagan yahay ee Puntland iyo Soomaaliland.
Guddiga Madaxabanaan ee Xuduudaha ayey ugu baaqday in aysan gudbin Warbixin iyagoo aan warbixin ka wadan oo aan gaarin degaanada Soomaaliland iyo Puntland ku murunsanyihiin.
“Somaliland waa lagu dhaci la’a yahay in la tago oo lasoo baaro xaduudaheeda,marka anigu waxaan qabaa in aan xaduudaheeda aana la fara gashan warbixintana laga saaro ” Xildhibaan Saynab Maxamed Caamir oo maanta ka hor hadashay Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Sidoo kale Xildhibaan Xasan Nuur Aadan ayaa ka hadlay arimaha ka taagan degmada Beladxaawo ee Gobalka Gedo taas oo ah dhul-boobka ay Kenya ka wado Soomaaliya isagoo ku taliyay in loo gurmado Shacabka halkaasi Kenya kula dagaalamaya oo isu dhigaya Taangiyada Kenya.
‘’Waa in laga hadlo dhibka iyo gumaadka lagu hayo shacabka ku dhaqan Baled Xaawo ee aan lagu mashquulin xaduudo kale in laso calaamadeeyo’’ayuu yiri Xildhibaan Xildhibaan Xasan Nuur Aadan oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Dhowr qof oo kale oo katirsan Golaha Shacabka ayaa arintaan aad uga hadlay iyagoo dalbaday in il gaar ah lagu eego Xaaladda Xuduuda Soomaaliya iyo Kenya ee dhanka degmada Beladxaawo ee Gobalka Gedo. Xildhibaanada ayaa rajo xumo wayn arintaan ka muujiyay waxayna Soomaalida ugu baaqayn in aysan ka samrin Taako kamid ah dhulka Soomaaliya.
Xildhibaan Cabdi Cali oo loo doortay Guddoomiyaha Baarlamaanka Bariga Afrika